Indlela yokuchonga umthi wase-American Basswood Tree
Izilwanyana kunye Nendalo Isiseko seNgcaciso yomthi
Imithi eLinden Family (Tiliaceae)
I-Tilia yintlobo ngaphakathi kwintsapho yaseLinden (i- Tiliacea ) yeentlobo ezingama-30 zemithi , ezizalwe kuzo zonke iindawo ezininzi zaseNyakatho yeNtlabathi. Iintlobo ezininzi zeentlobo ze-lindens zitholakala e-Asia kwaye umthi uhlakazeka kwiipokotho kulo lonke elaseYurophu nakumaMpuma Melika. Imithi ngamanye amaxesha kuthiwa yi-lime eBrithani kunye ne-linden kwiindawo zaseYurophu naseMntla Melika.
Igama eliqhelekileyo lomthi eNyakatho Melika yi- American basswood ( iTilia americana ) kodwa kukho iintlobo ezininzi ngamagama ahlukeneyo.
I-White basswood (var. Heterophylla ) ifumaneka eMissouri ukuya eAlabama nasempuma. I-Carolina basswood (var. Caroliniana ) ifumaneka e-Oklahoma ukuya eNyakatho Carolina nasezantsi eFlorida.
I-American basswood ekhulayo ngokukhawuleza ingaba yimithi emikhulu kwimpuma nentshonalanga yeMelika. Umthi uya kuhlala uxhasa iinqununu ezininzi kwisiseko sawo, uya kuhluma ngokugqithiseleyo ukusuka kwi-stumps kwaye i-seeder enkulu. Ngumthi obalulekileyo wemithi kwiMigodi yamaLwandle aMakhulu kunye neTilia americana yizilwanyana zase-northernmost basswood.
Iintyatyambo ze-Basswood zivelisa ubuninzi beectar apho i-honey honey. Enyanisweni, kwezinye iindawo zohlobo lwazo lweengcawa zibizwa ngokuba yi-bee-tree kwaye zingabonwa ngutya lwezinyosi.
Uhlobo lweMpawu kunye neNtsholongwane Iingcebiso
Iqabunga elingu-asymmetrical and lopsided heart-shaped is a large size of all the broadleaf trees, malunga nobude obude phakathi kwe-5 no-8 intshi. Uluhlu oluluhlaza olusenyakatho lweqabunga lugqithana nolwaluhlaza obumnyama obuncenkceshe kumhlophe.
Iintyatyambo ezincinci ezinqabileyo ziqhotyoshelweyo kwaye zixhomeke phantsi kwebhokisi elibomvu elincinci. Imbewu esiphumelayo ivela kwisiqhamo esinzima, esomileyo, esinomso onomisonto ogqithisileyo obonakalayo ngexesha lexesha lokulima. Kwakhona, jonga ngokukhawuleza amahlumela kwaye uya kubona i-zigzag phakathi kweefom e-oval kunye nesinye okanye amabini ama-bud bud.
Lo mthi awufanele udideke kunye ne-basswood yasemadolobheni angewona obizwa ngokuba yi-leaf linden okanye iTilia cordata . Iqabunga le-linden lincinci kakhulu kunezityiki kunye nomthi omncinane kakhulu.
Iintlobo eziqhelekileyo zeeNtshontsho zaseMntla Amerika
Amaqabunga: enye, i-ovate ngokubanzi, ibonwe ngokugqithiseleyo, ingagqitywanga kwisiseko.
I-bark: imnyama emnyama kwaye ilula.
Iintlobo: i- elliptical nut-like, imbewu enzima.
Unolwazi oluqhelekileyo oluqhelekileyo lweMntla eMelika
umlotha - uGenus Fraxinus
i-basswood - iGenus Tilia
i-birch - iGenus Betula
i-cherry yamnyama - uGenus Prunus
Umnyama omnyama / i-butternut - iGenus Juglans
i-cottonwood - iGenus Populus
elm - uGenus Ulmus
hackberry - uGenus Celtis
i-hickory - uGenus Carya
inkumbi - uGenus Robinia noGleditsia
magnolia - uGenus Magnolia
imephu - iGenes Acer
i-oki - iGenus Quercus
i-red alder - uGenus Alnus
paulownia wasebukhosini - iGenus Paulownia
i-sycamore - uGenus Platanus
u-tupelo - uGenus Nyssa
iWillow - iGenus Salix
i-poplar ephuzi - iGenus Liriodendron
Imithi enemiqhekeza elula - iLobed and Unlobed Leaves
I-College Joseph yaseMaine Admissions
Umthandazo Okumele Utsho Ngamadoda Aselula
Ubani Ubengumlambo Obomvu?
I-Dodge Grand Caravan Ebonisa ukukhanya kwe-LED Emva kokuba iBhettery ixhumeke
Iinjongo zeAnatomy kunye neMisebenzi
UWorginia Woolf 'Ukuthungwa Kwezitrato: I-London Adventure'